नेकपाको जहाज कता उड्दैछ ? – Mukhundo.com
नेकपाको जहाज कता उड्दैछ ?
नयाँ पार्टी दर्ता, राजीनामा माग र नेतृत्व असफल
mukhundo.com, २०७७ असार १७ बुधबार
नयाँ पार्टी दर्ता, दिल्लीले प्रधानमन्त्री हटाउन खोजेको अभिब्यक्ति, सरकार पार्टी एकलौटी संचालन तथा अंहंकार एकलब्यबाद लगायतको आरोप प्रत्यारोपले नेकपामा विवादको नयाँ श्रृंखला उब्जेको छ । यसले सरकार परिवर्तन र पार्टी फुट्ने जस्ता दुर्घटनाको संकेत देखा परेको छ।
रामेछाप । पछिल्लो समय नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाभित्रको आन्तरिक कलह राजनीतिक बृत्तमा चुलिएको छ । यसमा नेकपाभित्रका गुट र उपगुटले काम गरेको प्रष्ट देखिन्छ । यो आलेखमा नेकपाको गुट उपगुट भन्दा पनि पछिल्लो समय नेकपामा देखिएको मतभेद र प्रधानमन्त्री केपी ओली माथि स्थायी कमिटी सदस्यहरुको आक्रोश र राजीनामाको विषयमा केन्द्रित रहनेछ ।
नेकपाभित्रै ओली सरकारको काम कार्बाहीको चित्ता दुखाई धेरै नेताहरुले गरिरहेकै बेला ओली माथि स्थायी कमिटीका सदस्यहरु ओलीको बिरुद्ध लाग्नुले ओलीमाथि अहिले नैतिक दबाब बढेको छ । यसले नेकपाभित्रको सत्ता संघर्षकै रुपमा हेर्न आवश्यक छ ।
अब ओलीले संचालन गरेको जहाज कसरी अघि बढ्छ भन्ने निर्धारण पनि यही स्थायी कमिटी सदस्यहरुले गर्ने लगभग निश्चित जस्तै भईसकेको छ । किनभने नेकपाभित्रको यो कलह साम्मे हुन निकै गाह्रो छ ।
अघिल्लो बुधबारदेखि चलिरहेको स्थायी कमिटीको बैठक जारी छ । मंगलबार प्रधानमन्त्री ओली सहित १८ सदस्यको बैठकमा १७ जनाले त ओलीको राजीनामा माग गरेका थिए । यसले नेकपाभित्रको मतभेदलाई झन मलजल गरेको प्रष्ट्र हुन्छ ।
हाम्रो जहाज महाभुमरीमाः धनश्याम भूसाल
नेकपाका नेता धनश्याम भूसालले नेकपाको जहाज महाभूमरीमा फस्न लागेको बताएका छन् । मंगलबार राती एक बजे समाजिक संजाल फेसबुकमा आफ्नो धारण राख्दै उनले लेखेका छन्, हाम्रो जहाज महाभुमरीमा हेलिने अनिष्ट सम्भावना नजिकिन थाल्यो ! अर्थात्, हामी हरेकले फेरि एक पटक विवेक र धैर्यको परिक्षा दिनु पर्ने भयो ! नहड्बडाएर, एकताबद्ध भएर यसको सामना गरिने छ ।
पार्टीको हजाजले उडान सही ठाउँमा भर्न नसकेको र जहाजलाई सही दिशामा निर्देशन गर्न एकताबद्ध भएर लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनको यो धारणाले पनि नेकपाभित्रको कलह सहतमा आएको र नेकपाभित्रको कलहले पार्टीको दिशा नै परिवर्तन गर्नसक्ने संकेत गरेका छन् । उनले आफ्नो धारणामा सबैले विबेक र धैर्यताको जगमा टेकेर पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
नेकपाभित्रको कलह पहिलादेखि नै
नेकपाभित्रको असन्तोष अहिलेदेखिको होईन । गएको बैशाख १७ गते नै ओलीको राजीनामा गरिसकेको छ । सरकारले पार्टीको निर्देशन नमानेको सरकारले जनामुखी काम नगरेको जस्ता आरोप खेपीरहेको आलीमाथि अब राजीनामा नै माग्नुपर्ने परिस्थितिमा स्थायी कमिटी पुगिसकेको छ ।
यसले अब सरकार हेरफेर हुने निश्चित जस्तै देखिन्छ । तर यसमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र बामदेव गौतमले पनि ओलीको साथ छोडिसकेको छ । एमसीसी, राजनीतिक विध्येयक जस्ता विवादित विषयले ओलीको कमजोरलाई मलजल दिईरहेको छ ।
दिल्लीले होइन मैले राजीनामा मागेको होः प्रचण्ड
मदन भण्डारीको ६९ औँ जन्म जयन्तीको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए । यही अभिब्यक्ति विरुद्ध मंगलबार नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले यसको कडा प्रतिबाद गरे उनले भारतले राजीनामा नमागेको र आफूले मागेको बताए ।
प्रचण्डले ओलीको अभिब्यक्तिबाट नेपालले अझै आत्मनिर्णयको अधिकार प्रयोग गर्न पाएको छैन भन्ने सन्देश दिएको मात्र होइन, पार्टीकै नेताहरुमाथि अविश्वास देखिएको धारण राखेको थिए । साथै विदेश सम्बन्धमा पनि प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै यसबारे छलफल गर्नुपर्ने भएको पनि उनले बताएको थिए ।
भारतले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको होइन । मैले मागेको हो, तपाईले सरकार एकलौटी र असफल बनाउनुभयो । पार्टीको निर्देशन विपरित सरकारको काम गर्नुभयो उनले बैठकमा बोलेका थिए ।
निर्बाचन आयोगमा दल दर्ता
बैठकमा अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दल दर्ताका लागि निवेदन परेको विषय पनि उठान भ्याए । नयाँ केही समय अघि नै ओली सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धि ल्याएको विध्येकको एक हिस्साको रुपमा लिएका छन् नेकपाका ओली निकट बाहेकका नेताहरुले ।
मंगलबार स्थायी बैठकमा प्रचण्ठले भनेका थिए, कतिपयले केपी ओलीले पार्टी फुटाउँछन् भन्दै आएको र झापाकै मान्छेले दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको उल्लेख गर्दै उनले कसले किन नेकपा एमाले दर्ता गर्न खोज्यो भनेर खोजविन गर्नुपर्ने बताएको एक स्थायी कमिटी सदस्य संचारकर्मीसंग बताएका थिए । यसले के बुझिन्छ भने ओली नयाँ दल दार्ता गरी आफ्नो सरकार बचाउन लागेको देखिन्छ ।
मंगलबारको स्थायी कमिटि बैठकमा प्रचण्डले राखेको धारणको जवाफमा प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले भारतको विरोध गर्दा पार्टीका नेताहरुको चित्त किन दुख्यो ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए । तर, भारतले आफूलाई प्रधानमन्त्री पदबाट हटाउन खोजेको र त्यसमा नेपाली नेताहरुको सहभागिताबारे थप खुलाएनन् ।
प्रधानमन्त्रीले आइतबार आफूले भारतीय मिडियाहरुका बारेमा मात्र चर्चा गर्न खोजेको भन्दै आफ्नो भाषणको बचाऊ गरेका थिए । उनले निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले दल दर्ताको निवेदनबारे भने आफूलाई थाहा नभएको जानकारी स्थायी कमिटीलाई दिएका थिए । उनले दल दार्ताको विषयको बचाउन गर्दै स्थायी कमिटि बैठकमा बोलेका थिए, ‘दल दर्ता कसले किन गर्न खोनेको हो, मलाई थाहा छैन । मचाहिँ नेकपाकै मान्छे हुँ, यो पार्टीको अध्यक्ष हुँ ।’
साथै उनले ननईश्यूलाई ल्याएर पार्टीको बैठकमा किन छलफल गर्न खोजेको भन्दै प्रचण्डमाथि नै प्रश्न गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले संचार माध्यमलाई बताए थिए । जवाफमा प्रचण्डले दल दर्ता र भारतले सरकार ढाल्न खोजेको प्रमाणबारे प्रष्ट नभएको भनेका थिए । तर, त्यसपछि ओली नबोलीकनै स्थायी कमिटी बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
ओलीबाट पार्टी सरकार चलेनः स्थायी कमिटि
स्थायी कमिटिका ओली बाहेकका अन्य सदस्यले ओलीले पार्टी र सरकार संचालन गर्न नसकेको र ओलीको नेतृत्व असफल भएको धारणा राखेको थिए ।
मंगलबारको बैठकमा ओली र प्रचण्डको सवाल जवाफपछि स्थायी कमिटीमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले बोलेका थिए । झलनाथ खनालले स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका थिए । बैठकमा बोल्ने पूर्वएमालेका नेताहरु प्रचण्डभन्दा कडा रुपमा प्रस्तुत भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएका नेता खनालले ‘हामीलाई भारतको एजेन्ट भन्न खोजेको हो ? भन्दै ओलीलाई प्रश्न गरेका थिए ।
ओलीले सरकार एकलौटी चलाएको र पार्टी बैठकहरुको पनि उपेक्षा गरेको भन्दै खनालले प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुबै पदबाट ओलीको राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘पार्टीले हटाउँछु भन्यो भने केपी कमरेडले त्यसलाई मान्नुपर्छ । तनाशाहले जस्तो बलजफ्ती गर्न पाइँदैन’ उनले बैठकमा भने, ‘लिखित प्रस्ताव ल्याउँ, छलफल गरौं ।’
पार्टी एकतालाई कांग्रेसलाई हराउने र सरकारमा जाने अर्थमा मात्र बुझेका कारण पनि समस्या आएको उनले बताए । प्रधानमन्त्री ओलीमा आफूलाई बम्हज्ञानी ठान्ने, फरक मत राख्नेहरुलाई सत्रु मान्ने, अरुलाई दास बनाउन चाहने, उपयोग गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै उनले भने, ‘हिजोसम्म म यो सरकार सफल हुनुपर्छ भन्थेँ तर अब यो भन्न नसक्ने ठाउँमा पुगेको छु । हाम्रो पार्टीको सरकार सफल हुनुपर्छ भन्छु ।’ तर, प्रवक्ता श्रेष्ठ बोल्दा प्रधानमन्त्री ओली बैठकमा थिएनन् ।
Copyright July 1, 2020 Mukhundo.com Protected. All Rights Reserved.